Isigqoko kufanele sibe nini?
Imfashini Yabesifazane Izingubo
Noma yikuphi owesifazane, kungakhathaliseki ukuthi unakho, ungukuthi, ngendlela yakhe, wesifazane futhi ekhangayo.
Gqoka abafazi bokuphakama okuncane
Uzothenga ingubo? Bese uyeka ukukhipha mini, kodwa uma imilenze imincane kakhulu, igqoko elincane kufanele libe ngaphezu kwamadolo. Ukunakekelwa kufanele kuthathwe ukugqoka kuze kube phakathi kwe-roe, njengoba le ngubo igwema imilenze. Ngaphezu kwalokho, abesifazane abaphansi abahambisani neziketi eziluhlaza kakhulu.
Kufanele kube nini ukugqoka phansi?
Izingubo zokugqoka abesifazane abathandekayo
Ukuqapha okukhethekile kufanele kuhokhwe embukisweni wengubo yasehlobo. Abesifazane abagcwele banomkhondo we-trapezoid noma u-A. Kumele kube ngendwangu yokukhanya futhi kube isikhathi eside phakathi kwamadolo noma ephansi. Ungagqoke izingubo ezingavamile kakhulu.
Ukugcwele kwezigqoko kungakwazi ukufihla izingubo, okude ubude ngaphansi kwamadolo. Kumele kukhonjiswe kusuka kwendwangu yokukhanya, ungamatheli ezinyaweni zakho futhi ube nokusika okuxekethile. Ingxenye engenhla ingaba nzima, okuzogcizelela intamo nesifuba. Lesi sigqoko sizokwazisa.
Imfashini yehlobo ehlobo - ama-maxi agqoka
Ngezehlakalo zemikhosi, lezi zigqoko ziyizivakashi ezimukelekile. Kuyinto engavamile ukubona intombazane egqoke ingubo ende egijima ngokuphila okuvamile. Futhi lokhu akuqondakali. Ukuze ube ngowesifazane, akudingekile ukuba ugqoke ingubo emfushane kakhulu.
Izinsuku zasehlobo azihlukaniswa nezingubo zokukhanya zomoya. Lezi zinto ziye zaba yinto ebaluleke kakhulu e-wardrobe ehlobo. Uma ukhetha ingubo eyingqayizivele yama-maxi, udinga ukunaka ubude - ingubo akufanele ibe mfushane, kufanele ifihle ngokuphelele imilenze yakho, futhi ingapheli ezingeni lesithende. Kulokhu, izimbadada ezigumbini eziphambili nazo zifanelekile. Uma unokukhula okuphansi, ungagqoka izimbadada epulatifomu.
Isikhathi sasehlobo sinemibala ehlukene, izitayela futhi sibheka izingubo zama-maxi. Kule nkathi, izingubo zama-maxi zifashisa, zivela phambi kwethu emathuneni aphezulu kakhulu nemibala. Uhlala uthola isitayela sigcizelela isithunzi salesi sibalo futhi ikuvumela ukuba ungene emkhathini wamnandi nehlobo.
Izingubo ezide ezide
Okufanele kube yingxenye yezingubo zokuhlwa. I-Beauties yaseHollywood isebenzisa njalo izingubo ezinjalo emaphepheni obomvu obomvu futhi sekuyisikhathi eside ibonga lesi sitayela. Ngokuvamile abashadikazi bakhetha izigqoko ezide ezigqoka njengengubo yomshado, lapho befuna ukubheka okuhle.
Ukugqoka isikhathi eside kusihlwa kuyakulungele imikhosi futhi kuzokwenza ukuthi lo mdwebo ube mnhle kakhulu, ube mncane futhi ube nomunye. Zithungwe ezinhlobonhlobo ezibiza kakhulu - i-lace, i-chiffon, i-brocade, i-silika, i-satin nezinye izindwangu ezicebile nezokunethezeka. Ukuqedela amapharele, ubuhlalu, izinsimbi zomkhonto, i-lace njalonjalo kuyahambisana.
Ehhovisi kufanele ukugqoka ingubo eqondile yobude obude. Inketho ehle kuyoba yindlela yokugqoka evaliwe, idolo-ubude, umthunzi ohlakaniphile. Kuzofanelana kahle namajack kanye namabhujethi, futhi ubheke ibhizinisi-like futhi eqinile. Indwangu eqondile emfanekisweni wesifazane wezamabhizinisi uletha ukuthintwa kwezinto eziyinkimbinkimbi nobuhle.
Kuzo zonke izinsuku izinhlobo zokugqoka eziqhelekile ezide ezide ziphelele. Bahlanjululwa kusuka ezintweni ezehlukene.
Izembatho eziqondile zizofanelana nabesifazane kunoma yikuphi ukuphakama. Bahlezi ngokugcwele emfanekisweni wohlobo "uhlangothi" nethi "hourglass" nakwabesifazane abaphezulu, nakwabesifazane besimiso esincane, usizo lokukhulisa lesi silwane. Kodwa lapha kulesibalo izidingo ziyingozi kakhulu. Izambatho eziqondile kakhulu zizobuka abesifazane abancane, Abesifazane abanezinqama ezinkulu, abanamahlombe amakhulu noma isisu esisodwa akunconywa ukugqoka izingubo ezinjalo. Uma kungekho sikhumba esichazwe ngokucacile, khona-ke ungakwazi ukugqoka ingubo eqondile nge-strap esikhweni.
Ukugqoka ngokufanako kuyingxenye yokuphumelela. Ukuba okukhangayo nokuhehayo kuzokusiza ukuba ugqoke ingubo, kuzodlala, ukumomotheka, ukukhanyeka emehlweni, i-flying gait, ukuma okuziqhenyayo yizinto ezibangela ukuba ugqoke nawe isithombe esihle futhi esiyingqayizivele.
Intwasahlobo ekhanyayo ne-Mango: amaqoqo we-Premium futhi azinikezele
Indlela yokubopha u-tie
Indlela yokukhetha izingubo ezikhululekile zansuku zonke
Iholide ene-T & B: izithombe ezingu-TOP-3 ezimangalisayo ngoMashi 8
Iphethini lama-panties wesilisa angu-48-56
Amabhulukwe afghani, aladdin, ali-baba
Umlando wokubukeka kwesiketi
Ingqikithi yokugeza ngamalebula ezembatho
Indlela Yokutshala Ingane
Izinyathelo zokuqala ekuthuthukiseni ingane ekuqaleni
Indlela yokukhulula ukukhathala emehlweni, ukuzivocavoca ukuze unciphise ukukhathala kwamehlo
Izakhiwo zokuphulukisa ze-apula cider uviniga
Izingane ezingu-7 zombusazwe abadumile abahlala kwamanye amazwe
Omelette nge amajikijolo
I-pasta ene-zucchini, anyanisi nesipinashi
Amakhekhe amancane amancane nge-apricot jam
Ukuncintisana "Umhlahlandlela wesitayela" kusuka enkampanini ye-Econika!
Ithimba elimnyama neluhlaza, ukuqhathanisa: ukuzuzisa nokulimala
Konke okudingayo ukwazi ngesitshalo seqanda
Ezempilo zezingane esikoleni
Amaqiniso angu-10 mayelana nemigomo yonyaka wokuqala wokuphila kwengane
Indlela yokulungisa ama-sauces ngokufanele ngenhlanzi nenyama?
Ukuphatha noma Tricks: kanjani ukuhlela i-Halloween izingane ekhaya
Imincintiswano kaFebhuwari 14 esikoleni: imidlalo ehlelekile yezingane kanye nentsha